Site na Russia ruo China site na Cable Car na Nkeji asatọ - RayHaber
HomeỤWAAsia7 RussiaSite na Russia ruo China na Nkeji 8 site na Cable Car
01 / 08 / 2019 Levent Elmastaş 7 Russia, 86 China, Asia, ỤWA, General, Isi akụkọ, TELPHER 0
site na Russia ruo n'ụgbọ USB Cine na nkeji asatọ
E wuru ụgbọ ala ala mba ụwa mbụ na mmiri Amur n’agbata China na Russia. Cargbọ ala USB, nke a ga-ewu n’elu Osimiri Amur, ga-ejikọ Heine nke China na Blagoveshchensk nke Russia na njem nkeji asatọ.
Ndị na-ese ụlọ Dutch dọtara atụmatụ nke eriri ụgbọ ala Blagoveshchensk. Thelọ elu ụlọ nke nwere akụkụ anọ ga-enwekwa ihe ngosi dị elu nke na-agafe osimiri Amur na obodo Heine.
Thelọ ọrụ Dutch ga-ewukwa ụlọ ọdụ dị n'akụkụ China nke ụgbọ ala USB.
Osimiri Amur, nke na-agbaze n’oge ọnwa oyi, na-ejikọ obodo abụọ na azụmahịa.euronews)
Ogige 50 dị na Konya Tramway, ụgbọ okporo ígwè dị elu na-aga site na Konya ruo Ankara na 75 nkeji. 23 / 06 / 2012 N'agbanyeghị ngosi n'ụdị ntụ oyi ga-arụnyere dị 2 ọnwa tupu ọ bụla mgbanwe na tram ìsì ụmụ amaala, ndị President siworo meghachi omume Akyürek. Tram nke ghọworo ọnya ọbara ọgbụgba nke Konya, ụmụ amaala na-arịwanye elu. Ebe ihu igwe na-ekpuchi oke, okporo ígwè okporo ígwè Konyalı na-esite na njem na ọsọ ọsọ. 2 ọnwa gara aga Konya Metropolitan Mayor Tahir Akyürek "Anyị ga-wụnye ntụ oyi ozugbo tram" na a obi na okwu modicum ezie ala nke Konya, na mgbe ahụ na-ekwe nkwa edebeghị ya nēnwu ikwu okwu taa na-enwu. Ụmụ amaala bụ ndị mere mkpesa banyere enweghi ikuku oyi na trams, President Tahir Akyürek Tram
5 abụghị Besiktas na nkeji 4 Europe-Asia na nkeji 30 / 10 / 2013 5 abụghị Besiktas na nkeji 4 na nkeji Europe-Asia: Üsküdar-Sirkeci Marmaray'la site na ugbu a na 4 nkeji. Anyị na-akpọ ya '5 na nkeji'. Ugbu a, anyị ga-asị '4 Europe / Asia kwa nkeji'. Na Sunday, mụ onwe m gara Marmaray na ndị enyi nta akụkọ na òkù nke Minista Ụgbọ njem Binali Yıldırım. Agwara m ndị ọkachamara ogologo oge. nwere oghere mmeghe na ncheta. Enwere m ike ikwu nke a n'ụzọ dị mfe: ọrụ ga-adị mpako n'akụkụ ọ bụla. Mana m maara na ụfọdụ n'ime ha ga-emeghe megide ọrụ ahụ nanị n'ihi na ọ na-emepe na akụrụngwa AK, ụrọ ga-atụfu. N'aka nke ọzọ, Binali Yildirim kwusiri ike na ntinye ngosi
İzmir Meryem Anaya Teleferikle 10 22 / 11 / 2016 Izmir Virgin Mary cable ụgbọ ala 10 nkeji wepuÚ: The AK Party İzmir osote onye Mahmut Atilla Kaya, gwara ọha ego mere na Selçuk district na inweta asị ọtụtụ nde mmadụ ga-agbanwe akara aka nke Selcuk na-arụ ọrụ na liras, o kwuru. Kaya kwusara ozi ọma na oge ọhụrụ ga-amalite na Selçuk tinyere ego ndị gọọmentị mere. Virgin Mary Nature Park Project, ihe ndị kasị mkpa mmewere nke cable ụgbọ ala bụ reminiscent nke na-aga n'ihu na mgbalị na-akụ na AK Party İzmir osote onye Mahmut Atilla Kaya, cable ụgbọ ala, boutique hotels na ncheta o kwuru na ụlọ ahịa ndị ahụ ruru oru ngo ga-azụlite njem ẹkụre Selçuk. Mgbe oru ngo ahụ ezuchara, ọ ga-ekwe omume ịbanye na Selcuk na Virgin Mary site na ụgbọ ala dị na 10 nkeji.
Yht na Konya si Karaman gaa 40 26 / 08 / 2016 Yht na Konya ka Karaman 40 Minit gaa Gaa: Ụgbọ okporo ígwè dị elu iji mee nyocha na Karaman TCDD General Manager İsa Apaydın, Mayor Ertuğrul Çalışkan zukọtara ma gbanwee echiche. Onye isi nchịkwa nke TCDD bụ onye bịara Karaman iji mee nyocha na oke ọsọ İsa Apaydın, Mayor Ertuğrul Çalışkan zukọtara ma gbanwee echiche. TCDD General Manager İsa Apaydın, Konya-Karaman High Speed ​​Train line to see the site work and officials came to Karaman iji nweta ozi. Mayor Ertuğrul Çalışkan sokwa na TCDD General Manager Apaydın nnyocha na Karaman ọdụ ụgbọ oloko. President Çalışkan ...
Metro ka Üsküdara 24 ga-eru na nkeji 08 / 11 / 2013 Üsküdara 24 ga-eru na nkeji site na metro: Sancaktepe Mayor Sancaktepe Mayor İsmail Erdem na-akọwa ọkwá ya maka okwu ọzọ. Oge ọhụụ, ihe na-enye obi ụtọ n'ụbọchị. Sancaktepe'da na-agba ọsọ ọhụrụ 'ka o kwuru. Century oru ngo, nke a na-ekwu okwu Governor Erdem banyere Üsküdar- Sancaktepe ụzọ ụgbọ oloko na n'ihu nke Marmaray: "Istanbul Metropolitan Municipality na a ụzọ iso iga ọrụ rụrụ site na anyị President na Mr. Kadir Topbas oké mgbalị kwesịrị nke Istanbul. Metro dị ezigbo mkpa maka okporo ụzọ Istanbul. Kadir Topbaş, Mayor nke obodo Istanbul Metropolitan, kwuru okwu Kad
Balcova USB ụgbọ ala ruo afọ asatọ 30 / 07 / 2015 E mere njem mbụ ahụ mgbe nkeji afọ asatọ dị na Balçova Teleferic: Teleferic Facilities, nke a na-emegharị site na İzmir Metropolitan Municipality na 15.5 nde pound, na-enye ndị ọha mmadụ dị ka echi. Mayor Aziz Kocaoglu, bụ onye mere njem mbụ na ụgbọ ala ụgbọ elu na ndị isi obodo na ndị òtù nke obodo ukwu ahụ, kwuru, sị: oldu Ọ bụ ụlọ ọrụ na-adakwasị Izmir. Achọrọ m ka ụmụ amaala anyị nwee oge mara mma na ezinụlọ ha na ụmụaka ebe a Obodo Izmir Metropolitan, bụ nke na-emegharị Balsova Cable Car nke bụ otu n'ime ebe ndị njem nleta kacha mkpa na obodo ahụ na echiche ya banyere ndagwurugwu na ọdọ mmiri ahụ, na-enye ụlọ ọrụ nke oge a, nke e guzobere na ụkpụrụ EU, ọha na eze echi (31 July Friday). Na 10.00 ...
Nke a bụ usoro njem oge asatọ nke BRT! 06 / 09 / 2012 Obodo obodo ukwu nke Istanbul enyela akwụkwọ ozi banyere usoro ọnụọgụ ọhụrụ ahụ na metrobus. Na 2009 afọ, nke mbụ, 1-3 na-akwụsị ma 4 na n'elu kwụsịrị, a na-etinye ntinye ọnụahịa tarifụ 'nkwụsịtụ' (nkwụ ụgwọ dị ka ị na-aga), na nkwupụta ahụ, "ngwa ngwa nke atọ n'ime oge ọhụrụ ahụ gbasaa. N'ime usoro a, onye na-aga 3 na-akwụsị site na metrobus na-enweta ụfọdụ n'ime ego ha. Mgbe 3 kwụsịrị, a na-etinye ọnụahịa dị mma ". Nkwupụta ahụ gara n'ihu dị ka ndị a: alarında Na mba BRT ngwa ngwa, ọ na-abụkarị ego ọ bụla ịkwụsị
Metrobus nwere ọkwa elekere asatọ 08 / 10 / 2012 Obodo obodo ukwu nke Istanbul enyela akwụkwọ ozi banyere usoro ọnụọgụ ọhụrụ ahụ na metrobus. Na 2009 afọ, nke mbụ, 1-3 na-akwụsị ma 4 na n'elu kwụsịrị, a na-etinye ntinye ọnụahịa tarifụ 'nkwụsịtụ' (nkwụ ụgwọ dị ka ị na-aga), na nkwupụta ahụ, "ngwa ngwa nke atọ n'ime oge ọhụrụ ahụ gbasaa. N'ime usoro a, onye na-aga 3 na-akwụsị site na metrobus na-enweta ụfọdụ n'ime ego ha. Mgbe 3 kwụsịrị, a na-etinye ọnụahịa dị mma ". Nkwupụta ahụ gara n'ihu dị ka ndị a: alarında Na mba BRT ngwa ngwa, ọ na-abụkarị ego ọ bụla ịkwụsị
IZBAN Torbali, ụlọ ise na amaokwu asatọ zuru ezu 12 / 06 / 2014 Uzo ise na uzo asatọ n'elu uzo İZBAN Torbalı zuru oke: İzmir Metropolitan Municipality achichaala ulo oru ise na uzo uzo iri na uzo 30 kilomita İZBAN Torbalı. Torbali, Selcuk, Bayindir, Taya na Ödemişliler Izmir iji nyochaa ọrụ na saịtị iji nye aka na President Aziz Kocaoglu, "TCDD na ebe ozo nke njem na obodo anyi nwere obi uto iweta ihe karia." O kwuru. Torbalı Mayor Adnan Yaşar Görmez, Deputy Secretary General of the Metropolitan Municipality Raif Canbek na ndị ọrụ ụlọ ọrụ na-ahụ maka ọrụ ụlọ ọrụ Kocaoğlu gara na ọdụ ụgbọ okporo ụzọ ma kwuo, sị, iş Ọrụ eruola. Ngwa ngwa ikpochapu ma na-egosi na TCDD ...
Ihe gbasara oru Istanbul Havaray A ga-ekwupụta ọkwa asatọ gbasara ọrụ enyemaka na afọ a 29 / 01 / 2015 Istanbul havaray Project Eight consultancy ọrụ na-atụ anya na-mara ọkwa maka afọ a auctions Istanbul Metropolitan Municipality Transportation Planning Directorate "8 ibu havaray Project Consulting Service" ẹkenam na nso nso na nkọwa nke preparatory ọrụ maka auctions. Dị ka ozi ndị Investments Magazine natara; a na-atụ anya na a ga-ebipụta akwụkwọ ndị a na-eme n'ọdịnihu n'afọ a. ozi metụtara ngo na ajụjụ dị ka ndị a: - Beyoglu - Sisli 5,8 km - Zincirlikuyu - Besiktas - Sariyer 4,5 km - Levent - Gultepe - Çeliktepe - Levent 5,5 km - Ewepụghị - Ümraniye 10,5 km - Sefaköy - Kuyumcukent - Airport 7,2 km ...
Ewelite mba ụwa nke mbụ
Russia China Ropeway oru ngo
Ogige 50 dị na Konya Tramway, ụgbọ okporo ígwè dị elu na-aga site na Konya ruo Ankara na 75 nkeji.
5 abụghị Besiktas na nkeji 4 Europe-Asia na nkeji
Yht na Konya si Karaman gaa 40
Metro ka Üsküdara 24 ga-eru na nkeji
Balcova USB ụgbọ ala ruo afọ asatọ
Nke a bụ usoro njem oge asatọ nke BRT!
Metrobus nwere ọkwa elekere asatọ
IZBAN Torbali, ụlọ ise na amaokwu asatọ zuru ezu
Ihe gbasara oru Istanbul Havaray A ga-ekwupụta ọkwa asatọ gbasara ọrụ enyemaka na afọ a